Izinyosi zimvimbele ukungena endlini | IOL Isolezwe
Izinyosi zimvimbele ukungena endlini
Isolezwe / 28 August 2012, 11:59am /
Indlu kagogo u Jemina Mzelemu angakwazi ukungena kuyo ngenxa yezinyosi.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
USENKINGENI ugogo waseMlazi kwa-A ongakwazi ukungena endlini yakhe ebilungiswa nguMasipala weTheku emuva kokulinyazwa yimvula. Osekuvimbe ugogo manje izinyosi athi zigcwele kwelinye lamakamelo.
UNkk Jemima Mzelemu (73) nomndeni wakhe bayaphoqeleka ukuthi baqhubeke nokuhlala endlini engekho esimeni sokuhlala abantu ngenxa yokusaba ukutinyelwa yizinyosi abathi zigcwele indlu.
UNkk Mzelemu uthe usezibikele ngisho nezikhulu noMnyango wezeZindlu eThekwini okwakuthiwe akabike kuwona uma ehlangabezana nezinkinga kodwa alukho usizo alutholayo.
“Sengibhodloze udonga ngashisa amathayi, ngadiliza ngakha kabusha kodwa lutho ukuhamba izinyosi,” kuzikhalela lo gogo oveze ukuthi okwenza isimo sibe sibi kakhulu wukuthi kunengane encane abasabela ukuthi ingatinyelwa yizinyosi.
Umzukulu wakhe uSandile Mzelemu (25) uthe ikhansela selimgijimise kakhulu ugogo wakhe ehamba yedwa ezama ukuxazulula le nkinga kodwa kungalungi.
Isolezwe lifike kulo muzi izolo lizozibonela, lazithela phezu kwazo izinyosi zibhuza kucaca ukuthi uma ungaphazamisa itane lazo kuyobe uzithintele.
Lo gogo uthe ngaphandle kwezinyosi nayo indlu yakhe ayikho esimeni esikahle, njengoba ethi ama-frame eminyango esemadala.
Ubuye wakhaliswa nawukuthi ababeyilungisa babeyakambisa nje benza sengathi babemlungisela indlu.
“Ingcono yona kunale engihlala kuyo ngoba ingangimboza noma nini uma kunemvula kodwa phela ayilungiswe kukhishwe nalezi zinyosi ngoba akekho umuntu ongalala endlini enezinyosi ezingaka, ikakhulukazi njengoba kunengane encane,” kusho uNkk Mzelemu.
Ikhansela lakule ndawo, uMnuz Mthokozisi Nojiyeza, oqhamuke kungalindelwe, kuvele kwacaca ukuthi ubeqala ukuzobona le ndlu. UNojiyeza ubebabaza ethi ayikho le nto eyenziwe kulo muzi kufanele uqale phansi ulungiswe.
“Ukubhodloza udonga kuyimoshe kakhulu le ndlu kanti futhi angazi ukuthi yini bengawashintshanga ama-frame omnyango. Akupendiwe futhi nakahle,” kusho uNojiyeza.
Uthembise ukulusukumela lolu daba wathi kusasa (namuhla) uzokhuluma nabo bonke abathintekayo ilungiswe indlu ngokukhulu ukushesha ukuze kusizakale ugogo.